Madaxweyne Donald Trump oo dib ugu laabtay ololahiisa doorashada. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Donald Trump oo dib ugu laabtay ololahiisa doorashada.
Madaxweyne Donald Trump oo dib ugu laabtay ololahiisa doorashada.
Kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay magaalada Sanford ee gobolka Florida, wuxuuna ahaa kulankii ugu horeeyay oo qeyb ka ah isu soo bax dadweyne oo Trump ka sameyn doona maalmaha soo socda gobolada sida weyn loogu hardami doono.
Madaxweyne iyo ninka la loolamaya Joe Biden ayaa u kala dheereynaya sidii ay u xaqiijin lahaayeen codadka dadweynaha Mareykanka ka hor sadexa November.
Isniintii Mr Biden waxaa uu ka ololeynayay gobolka Ohio oo ka mid ah gobolada loolanka adag ka taagan yahay xilligan.
Ra’yi aruurinta ayaa tilmaamaysa in Biden oo ka horeeyo Trump 10 dhibcood laakiin kala horeynta gobolada muhiimka ah ayaa ah mid aad la isugu dhow yahay, tusaale ahaan Florida Biden wuxuu ka horeeyaa Trump 3.7 dhibcood, sida laga soo xigtay xarunta Real Clear Politics oo odorasta natiijada doorashooyinka.
Gobolada sida weyn loogu dagaalami doono ayaa waxaa kamid ah Florida oo leh 270 codadka loo yaqaano electoral College oo ah kuwa ciddii heshaa ay ku guuleysan karto Aqalka Cad, hase yeeshee taas oo laguma go’aamin doono.
Mr Trump ayaa laga heley Covid-19 ku dhowaad 11 maalin ka hor, waxaa la seexiyay isbitaalka Walter Reed Medical Center , Laakiin axaddii dhakhtarkiisa gaarka ah wuxuu sheegay in madaxweyne uusan dadka kale u gudbin doonin xanuunka, sidoo kale isniintii war soo baxay wuxuu sheegayaa in baaritaano dhowr ah oo Trump lagu sameeyay oo noqday mid laga waayay safmarka corona
Madaxweyne Donald Trump oo dib ugu laabtay ololahiisa doorashada. was last modified: October 13th, 2020 by Admin
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay qoyska Cali Khaliif Galeyr
Madaxweyne Farmaajo & dhiggiisa Ciraaq oo wadahal yeeshay
Dowladda Somaliya oo Amaro kusoo rogtay Gaadiidka Dadweynaha
Jamhuuriyadda Shiinaha oo Somaliland uga digay in ay Xiriir la sameystaan Taiwan
Golaha Ammaanka ee QM oo walaac ka muujiyey Ciidanka Dowladda geysay Gedo
Kulan looga hadlayay wax-ka-beddelka iyo Kabista Sharciga Axsaabta Siyaadda dalka
Marwada 1aad dalka oo la kulantay Qunsulka Safaaradda Tanzania